Saturday January 22, 2022 - 09:18:07
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa galabta ka dhacay weerar hubeysan oo ay fuliyeen dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab.
Weerarkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxa uu ka dhacay bartamaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir kaasoo lagu bartilmaameedsaday nin oday ah oo soo doortay xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Federaalka.
Sida ay inoo sheegeen goob joogayaan waxaa ergayga lagu magacaabi jiray Geesey Cusmaan Cabdulle, waxaa aad looga garanayay degmada Kaaraan isagoo caan ku ahaa la shaqeynta maamulka degmada.
Saraakiil ka tirsan DF ayaa cambaareeyay dilka ergaygan, Xarakada Al-Shabaab waxay dhankeeda horey u sheegtay iney beegsanayso cid kasta oo soo doorata Xildhibaan maadaama xildhibaanadu ay sheegtaan iney yihiin SHARCI DAJIYE-YAAL.
Todobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho lagu dilay ergay isna wax kasoo xulay xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka.